Ra'iisul Wasaaraha oo u kuur-galay kobaca dhaqaale ee Bankiga dhexe iyo Dekadda (Sawirro)
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumada Federaalka ee Soomaaliya Mudane Cabdi Faarax Shirdoon ayaa maanta kormeeray koboc iyo horumarada dhaqaale ee Bankiga dhexe iyo Dekedda Muqdisho, waxaana kormeerkiisan ku wehliyay Wasiirada Maaliyadda, Howlaha guud, Arrimaha gudaha iyo Warfaafinta.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya oo tacsi diray dhalinyarada Soomaaliyedna la dar-daarmay.
Muqdisho, October 5, 2013—-Ra’iisul Wasaaraha Xukuumada Federaalka Soomaaliya Mudane Cabdi Faarax Shirdoon “Saacid” ayaa ka tacsiyeeyey geerida dad tahriibayaal Soomaali ah oo ku geeriyooday xeebaha Jaziirada Lampedusa ee dalka Talyaaniga.
Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo baaq udiray dowladda Koonfur Afrika
Sagal Radio Services • News Report • June 3, 2013
Ra'iisul wasaaraha Xukuumada soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon “Saacid” oo waraaq u qoray madaxweynaha dalka South Afrika Jacob Zuma ayaa muujiyay sida uu uga walacsanyahay bad qabka shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Koofur Afrika.
Ra'isul Wasaare Saacid oo Guddi u magacaabay Arimaha Jubooyinka
Sagal Radio Services • News Report • May 15, 2013
Ra’isul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Cabdi Faarax Shirdoon (Saacid) ayaa magacaabay guddi ka kooban ilaa 16 xubnood oo ka kala tirsan labada gole ee dowladda, kuwaasoo kasoo shaqeyn doona arimaha Jubooyinka iyo weliba sidii xal waara looga gaari lahaa.
Raysal wasaare Saacid, oo sheegay inay la dagaallamayaan qabyaaladda iyo musuqa
R/wasaaraha xukuumada Soomaaliya Cabdi Faarax Shiirdoon Saacid ayaa sheegay in dowlada Soomaaliya ay dadaal ugu jirto sidii ay Caddaalada iyo sharciga u gaarsiin lahayd dhammaan gobolada dalka,wuxuuna tilmaamay iney muhiim tahay in sharciga iyo kala danbeynta la gaarsiiyo dhammaan dalka si loo hirgaliyo dowladnimada Soomaaliya.
Raysal Wasaare Saacid "Qaraxii KM4, ma hakin doono howlaha dowladnimo"
Sagal Radio Services • News Report • May 6, 2013
Ra’iisul Wasaaraxa Xukuumada Fedaraaliga ah ee Soomaaliya Mudane Cabdi Faarax Shirdoon Saacid ayaa tacsi tiiraanyo leh u direy eheladii iyo qaraabadii muwaadiniintii lagu gumaaday qaraxii maanta ka dhacay Muqdisho, asagoo dhaleeceeyay falkaasna ku tilmamay mid arxan daro ah.
Raysal wasaare Saacid oo kormeeray xerooyin ciidan iyo xarumo dowladeed
Sagal Radio Services • News Report • April 25, 2013
Ra’iisal Wasaaraha Xukuumada Federaalka Soomaaliya Mudane Cabdi Faarax Shirdoon Saacid ayaa maanta kormeeray qeybo ka mid ah xarumaha tababarka ciidamada, iyo goobo kale, sida, Xarunta Wasaaradda Gaashaandhigga, Dugsiga Tababarka ee Jenenar Kaahiye (Ex. Iskola Bolisiya), Xerada Jazeera, taliska Ciidanka nabadsugida Qaranka, taliska Gaadiidka Booliska Soomaaliyeed, xarunta maamulka gobolka Banaadir, iyo Wasaaradda Warfaafinta, Boostada iyo Isgaarsiinta.
Raysal wasaare Saacid oo sheegay inay sii wadi doonaan dagaalka ka dhanka ah Shabaab
Raysal wasaaraha Jamhuurriyadda Soomaaliya Md. Cabdi Faarax Shirdoon (Saacid), ayaa sheegay inay dowladda Soomaaliya ay sii wadi doonto dadaalka nabad iyo xasilooni dalka loogu soo celin doono.
RW Saacid oo Jowhar gaaray
Raysal wasaaraha Soomaaliya Md. Cabdi Faarax Shirdoon Saacid, oo shalay uun magaalada Muqdisho dib ugu soo noqday kadib safar dhowr cisho qaatay oo uu ku tagay Kismaayo, ayaa isla maanta gaaray degmada Jowhar ee xarrunta gobolka Shabellaha dhexe.
Raysal wasaare Saacid oo Garroowe gaaray
Sagal Radio Services • News Report • March 9, 2013
Raysal wasaaraha Soomaaliya iyo wafdi uu hoggaaminaayo, ayaa gaaray maanta magaalada Garroowe ee caasimadda maamulka Puntland, halkaas oo madaxda maamulku ay ku soo dhaweeyeen.
Raysal wasaaraha Soomaaliya oo nabad ugu baaqay dhinacyadii ku dagaallamay Kismaayo
Sagal Radio Services • News Report • February 24, 2013
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon Saacid ayaa maanta soo saaray baaq ku aadan dagaalka ka soo cusboonaaday Kismaayo.
RW Saacid "Garsoorka waa madax bannaan yahay"
Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya, Cabdi Faarax Shirdoon (Saacid) ayaa sheegay in hay’adaha garsoorka dalka ay ka madaxbannaan yihiin hay’adaha kale ee xukuumadda, isagoo xusay in maxkamaduhu ay iyaga u madaxbannaan yihiin xukunnada ay ridayaan.
Raysal wasaare Saacid oo soo dhaweyay aqoonsiga Mareykanka ay siisay dowladda Soomaaliya, kana hadlay arrimmo kale
Sagal Radio Services • News Report • January 20, 2013
Raysal wasaaraha xukuumadda Soomaaliyaq Md. Cabdi Faarax Shirdoon oo maanta shir jaraa'id ku qabtay Xafiiskiisa ayaa aad ugu mahadceliyay dowladda iyo dalka Mareykan oo si rasmi ah u aqoonsaday dowladnimada Soomaaliya mudo 1991-dii iyo wixii ka dambeeyay taasina waxaan ka muujineynaa madnaq.
Raysal wasaare Saacid oo sheegay inay dhawaan dib u bilaabayaan wada-hadalka Somaliland
Ra'isulwasaaraha xukuumadda Soomaaliya Mudane Cabdi Faarax Shirdoon (Saacid) ayaa sheegay in xukuumadiisu wadahadal la bilaabi doonto maamulka Soomaaliland si loo soo nooleeyo wadahadaladii horay ugu socday dowladii KMG Aheyd iyo maamulkaasi.
Raysal wasaare Saacid "Mudnaanta koowaad waa amniga Muqdisho"
Raysal wasaaraha Soomaaliya Md. Cabdi Faarax Shirdoon (Saacid), ayaa sheegay in muhiimad gaar ah ay siin doonaan ammaanka caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho.
R/W Saacid oo hortagaya baarlamaanka dalka
Sagal Radio Services • News Report • October 16, 2012
Raysal wasaaraha dalka Soomaaliya Md. Cabdi Faarax Shirdoon (Saacid), ayaa lagu wada in maalinta berrito ah oo Arbaco ku beegan hor yimaaddo baarlamaanka dalka Soomaaliya.